दक्ष मालवेयर हटाउने: Semalt बाट गाइड
यो गाईड तपाइँलाई प्रणालीबाट मालवेयर हटाउन मद्दतको लागि डिजाइन गरिएको थियो जुन संक्रमित भएको छ यदि यो सफलतापूर्वक बुट गर्न सक्दछ भने। यदि तपाइँ शंका गर्नुहुन्छ कि तपाइँको डिभाईसले संक्रमित गरेको मालवेयर क्रिप्टो (क्राइप्टोलोकर, टेस्लाक्रिप्ट, इत्यादि) हो भने यो गाईड तपाईको लागि होईन। तपाईको डेटा खतरामा छ र तपाईले यसको सट्टामा पोष्ट गर्नु पर्छ। यदि तपाइँको कम्प्युटर मालवेयर को परिणाम स्वरूप बुट गर्न को लागी क्षमता छैन भने, तपाइँलाई एक पोष्ट गर्न सल्लाह दिइन्छ किनभने यो मार्गनिर्देशन सहयोगी नहुन सक्छ।
यदि तपाइँ निम्न प्रक्रियाहरू कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, Semalt , जुलिया Vashneva को विशेषज्ञ द्वारा दिएका, तपाईं challenges ० प्रतिशत भन्दा बढी परिदृश्यहरूमा आफ्ना चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। त्यो नोट गरियो, सबै मालवेयरको डिजाइन समान छैन र समान अवस्थामा भाइरस हटाउने उपकरणको डिजाइन उस्तै छैन।
त्यसपछिको निर्देशन सिफारिशहरू मात्र हुन्। तपाईले आफ्नो कम्प्यूटरमा कार्यान्वयन गर्न रोज्नु भएको कुनै पनि चालको लागि तपाईं जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले यस गाइडलाई पछ्याउने निर्णय गरेको खण्डमा तपाईंको अपरेटि or वा अनुभव डेटा हानि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण तपाईलाई यो गाइड पछ्याउनु भन्दा पहिले तपाईको डेटा लाई जगेडा गर्न सल्लाह दिइन्छ।
मालवेयर समाधानको लागि चरणहरू
तपाईले पहिले आफ्नो ब्राउजर विस्तारहरूमा जानु पर्छ र सबै आइटमहरू हटाउनु पर्छ जुन शंकास्पद देखिन्छ। एक अनौंठो गृहपृष्ठ र ब्राउजरको सेटिंग्स हटाउन को लागी याद गर्नुहोस्।
यस क्रममा निम्न गियरहरू डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्। सबै उपकरणहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस् अन्यथा नभएसम्म उपकरणहरू चलाउँदा तपाईं सामान्य मोडमा हुनुहुन्छ भनि सुनिश्चित गर्नुहोस्।
तपाइँले छोड्नु पर्छ अब सम्म म निर्धारण गर्न सक्दछ किन RKILL जोखिममा परेको छ
१ कार्यान्वयन [rkill.com]। केहि केसहरूमा, यसले केहि मिनेट लिन सक्दछ।
२. मालवेयरबाइट्स of.० को मितिको प्रतिलिपि डाउनलोड गर्नुहोस्। "रुटकिट्सका लागि स्क्यान" विकल्पलाई स्विच गर्नुहोस् र त्यसपछि स्क्यान कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
Using. "स्क्यान विकल्प चलाएर मालवेयरबाइट्स ADWCleaner प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसपछि" क्लीनिंग "क्लिक गर्नुहोस् र पूर्ण गरिसकेपछि यसलाई प्रणालीमा पुनःस्टार्ट गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
Mal. Malwarebytes जंकवेयर हटाउने उपकरण स्थापना गर्नुहोस् र यसलाई पूरा गर्न अनुमति दिनुहोस्। एक पटक सकिएपछि तपाईंको कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्।
Install. सोफोस हिटमैनप्रो स्थापना गर्नुहोस्
मालवेयर को परिभाषा के हो?
एक समावेशी अवधिमा मालवेयर जसले विभिन्न प्रकारका शत्रुतापूर्ण अनुप्रयोगहरू समावेश गर्दछ जसमा कम्प्युटर वर्म्स, भाइरस, रेन्समवेयर, एडवेयर, स्केयरवेयर, र अन्य खराब अनुप्रयोगहरू समावेश छन्।
कसरी मेरो कम्प्युटर संक्रमित भयो?
निश्चितताको साथ संक्रमणको स्रोत निर्धारण गर्न यो चुनौतीपूर्ण छ। धेरै जसो केसहरूमा प्रयोगकर्ताले अन्जानमै संक्रमणहरू चालू गर्न अनुमति दिँदछ।
भविष्यमा संक्रमणको विरूद्ध कसरी जोगाउने:
तपाइँ के डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यसमा उत्सुक हुनुहोस् र तपाइँको प्रणालीमा चलाउनुहोस्। प्रोग्रामहरू अपडेट गर्नुहोस् जस्तै फ्ल्यास र जाभा तिनीहरूका आधिकारिक साइटहरू प्रयोग गरेर। तलका उपकरणहरूले तपाईंको कम्प्युटर सफा गर्न मद्दत गर्दछ:
शुल्क रहित एन्टिभाइरस
ESET नि: शुल्क अनलाइन स्क्यानर
यूबलक मूल ब्राउजर विस्तार
यस गाईडमा सिफारिश गरिएका दृष्टिकोणहरू उनीहरूको उच्च सफलता दरको कारण विशाल पैमानेमा चयन गरियो। तर, केहि केसहरूमा यी चरणहरू अनुसरण गर्दा पर्याप्त नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले उन्नत सहयोगको लागि अनुरोध गर्नु पर्ने हुन सक्छ।